Nidaamka Kormeerka: Tom's Mac Software Pick
Software & Apps Mac kaliya
Raac Imtixaanka Mac-uca Macluumaadka iyo fiiri Natiijooyinka ku yaal Barmaamulka
Miyaad ku raaxeeysataa jilicsanaantaada Mac, isku day inaad ku hesho waxqabadka ugu sarreeya ee hardware ? Ama laga yaabo in aad haysato nooc ka mid ah dhibaatooyinka isdaba-joogga ah ee aad u malaynayso inay la xiriiri karto heerkulka gudaha Mac, ama arrimo kale oo culus oo ah Mac Macadkaaga.
Waxaa jira nidaamyo dhowr ah oo kormeera barnaamijyada la heli karo Mac, oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah Waxyaabaha Kormeeraha Waxqabadka , kaas oo lagu siiyay lacag la'aan Mac. Laakiin kuwa isticmaalayaasha awoodda raadinaya qalabka kormeerka, nidaamka nidaamka Marcel Bresink way adag tahay in la garaaco.
Kormeeraha waxaa loo soo bandhigaa sida bar muraayadda ah, iyada oo mar walba la heli karo oo ka baxsan.
Bandhigga la iskudhin karo.
Toddoba qaybood oo muhiim ah ayaa la kormeeray, mid kasta oo leh doorashooyin ballaadhan oo kala duwan.
Muuqaal aad u badan oo ku yaal bar miiska.
Inta badan sawir madow iyo caddaan ah; isticmaalka xaddidan ee midab loogu talogalay urur.
Ma jiraan digniino ama digniino digniin ah.
System Monitor waa app oo kormeeraya qaybaha muhiimka ah ee Macagaaga iyo bandhigaya waxqabadyadooda ku dhow waqtiga dhabta ah ee Mac-ka maktabadda. Waxaa jira todobo qaybood oo la kormeero:
Sensors Main (heerkulka CPU iyo xawaaraha)
Shey kasta oo la kormeero wuxuu bixiyaa doorashooyin kala duwan, laga bilaabo nuqulinta kormeerka shayga, si loo qeexo xuduudaha sida kormeerka loo fuliyo. Iyada oo la isugeynayo shay kasta oo si fudud loo samayn karo, si aad si buuxda u fahamto doorashooyinka qaabeynta, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso safar faylka caawinta iyo buuga la socda.
Isticmaalka Nidaamka Nidaamka
Kormeeraha Nidaamka wuxuu ku rakibayaa app sida ku qoran faylkaaga / Faylashaada. Xaqiiqdii waxaa lagu keydin karaa meelkasta oo aad rabto, laakiin Faylka / Dukumiintiyada Codsiyada waa mid wanaagsan oo ah mid kasta oo hubiya in la ogaado oo la cusbooneysiiyo iyada oo loo marayo Mac App Store .
Inkasta oo qaybta muuqaalka ugu weyn ee appku ay tahay qaabka dheer ee astaamaha iyo xogta lagu daray mashiinka maktabadda Mac, ujeedka dhabta ah ee samaynta barnaamijka ayaa ah doorashooyinkeeda, taas oo kuu oggolaaneysa in aad sameysid mid kasta oo ka mid ah toddobada goobood ee kormeerka.
Guud iyo Qorshaha Diyaargarowga Makhaayadaha ee Baraha
Fursadaha ayaa loo jajabiyaa todobada walxood ee la kormeero, oo lagu daray xulasho guud oo lagu dabaqi karo guddiga, iyo meel lagu xakameeyo habka muraayada menu .
Maqnaanshaha Maqalka Maqalka, waxaad xakameyn kartaa cabbirka taariikhda iyo garaafyada lagu soo bandhigay, iyo sidoo kale amarka alaabooyinka la kormeeray la muujiyay.
General Settings waxay kuu oggolaaneysaa inaad qeexdo heerkulka heerkulka si aad u isticmaasho, sida cabbirka xasuusta la soo bandhigo, iyo haddii dadweynuhu wajahayaan IP (dhinaca WAN ee shabakadaada) waa in lagu soo bandhigaa. Waxaa sidoo kale jira jahwareer yar oo app ah at this point. Sababta qaar, haddii aad doorato inaad ku muujiso cinwaanka WAN ee Interfaces Network, barnaamijku wuxuu ku talajiraa inaad adeegsanayso adeegga DNS oo aad u baahan tahay inaad siiso macluumaad ku saabsan adeegga aad isticmaalayso, iyo inta jeer ee aad ku adkaato cinwaanka WAN si loo cusbooneysiiyo.
Ma hubo sababta ay u muujineyso cinwaanka WAN-gaas si toos ah micnaheedu waa inaad adeegsaneyso adeegga firfircoon ee DNS , laakiin malaha waa qalad, waxaana rajeynayaa in mustaqbalka soo socda, qaababka firfircoon ee DNS ay noqon doonaan kuwo isku xiran oo kaliya soo bandhig cinwaankaaga WAN.
Xogta Ilaha Xogta
Toddoba walxood ee la kormeero mid kastaa wuxuu leeyahay nidaam u gooni ah, oo kuu oggolaanaya sida loo soo uruuriyo xogta loo soo uruuriyo loona soo bandhigo shey kasta. Xaaladaha intooda badan, waxaad haysataa ikhtiyaarka inaad isticmaasho noocyada kala duwan ee jaantusyada, qiimaha dhabta ah, ama boqolkiiba, sida ku haboon shey kasta.
Qaar ka mid ah goobaha xiisaha leh waxaa ka mid ah kuwa dukumiintiyada, kuwaas oo kormeera akhrinta iyo qorista , qorista , qorista ama qorista xawaaraha, wadarta guud ee qoraalka ama qorista hawlaha, iyo waxoogaa xuduudo badan oo muhiim u ah labadaba si loo kormeero waxqabadka kakabkaaga, iyo sidoo kale si ay u saadaaliyaan hababka guul-darrada ah ee suurtogalka ah ee laga yaabo inay diyaar u yihiin inay dhacaan.
Goob kale oo xiiso leh waxaa loogu talagalay Dhaqdhaqaaqyada, kuwaas oo jilicsanaa maalmo markii Macsiyada ugu badan ay isticmaalaan wadooyinka dibadda, mid kasta oo haya iftiinkiisa gaarka ah ee iftiimaya marka akhriska ama qoruhu dhaco. Haddii aad seegto maalmaha laydhka kombuyuutarka, waxaad isticmaali kartaa kormeeraha hawleedka si aad u daawato isticmaalka qalabka diskka ama shabakada, oo muujiya natiijooyinka nalalka firfircoon ee baraha menu. Isku diyaari nalalka faraha badan.
Qeybta inteeda kale ee la kormeeray way fududahay in la isku hagaajiyo, laakiin haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid, Nidaamka Kormeerku wuxuu leeyahay nidaam gargaar aad u fiican oo ay ku jiraan qorista ku saabsan sida loo isticmaalo shay kasta, si fiican u sharaxaya waxa xulasho kasta iyo sida inaad isticmaasho.
Nidaamka Monitor Monitor Bar Bar
Marka wax waliba la isku hagaajiyo, waxaad aadi kartaa shaqadaada maalinlaha ah oo aad fiirin kartaa muraayadda mararka waqti si aad u ogaato sida Macagu u shaqeynayo. Dabcan, isticmaalka dhabta ah ee Kormeeraha Nidaamka wuxuu yimaadaa markaad la kulantid arrin Mac, sida boorsada xeebta / calaamad fareemka, shabakad gaabis ah , ama waxyaabo kale oo kumbuyuutar ah. Iyadoo La socoshada Nidaamka Hawlaha, kaliya fiiri degdeg ah ayaa kaa caawin kara inaad fahamto waxa socda, iyo, rajeynaya, kaa caawinaya xallinta dhibaatada.
Guud ahaan, waxaan jeclahay Monitor Monitor. Waxaan u maleynayaa in gelitaanka nidaamka muraayadda ee miiska cuntada uu ahaa fikrad wanaagsan. Dhibaatada leh barnaamijyo badan oo kormeerid qalab kale oo badan ayaa waxay qaadanayaan qaar ka mid ah shaashadda hantida maguurtada, iyaga oo ka dhigaya kuwo aan waxtar lahayn markaad leedahay daaqadaha agagaarka si aad u aragto marka aad dhab ahaantii ka shaqaynayso Mac, barnaamijka kormeerka. Nidaamka Kormeeruhu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dib ugu noqotid si aad shaqada ugu noqotid oo aad si fudud u ilowsiisid kormeerka, marka laga reebo marka wax su'aal ah dhacayo, ka dibna xogtu waa sax ugu jirta miiska cuntada.
Hase yeeshee, hoos u dhaca, waa, in muraayadda menu ay noqon karto mid aad u badan oo leh dhamaanba Xulashada Kormeerka ee loo rogay. Si aad u hesho barnaamijka ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad taxadar leedahay, oo kaliya awood u yeelato hawlaha aad u maleyneyso inaad u baahan tahay; kuwaas oo gacan ka geysan doona sidii loo xajin lahaa.
Faallada xun ee kama dambaysta ahi waa midabka aan midabka lahayn. Haa, qaar ka mid ah qaybaha Monitoring System ayaa leh midabada midabada leh, laakiin guud ahaan, muuqaalku waa mid madow iyo caddaan ah. Waa runtii xoogaa niyadjab leh. Taabashadda midabku waxay sameyn doontaa wax cajiib ah, waxayna ka caawineysaa ururada muuqaalka ah ee u dhexeeya waxyaabaha kala duwan ee la kormeerayo. Marka alaabtu ay dhamaan yihiin madow iyo caddaan ah, waxay u muuqdaan inay si wadajir ah u wada soconayaan, taas oo ka dhigeysa in ay ka sii adag tahay inay u noqoto inay soo qaadato shey gaar ah.
Nit ka midka ah, Kormeer System wuxuu si sax ah u samaynayaa waxa aad filayso in la sameeyo, oo wuxuu ku sameeyaa adigoo isticmaalaya bar muraayadda oo aanad qaadin shaashadda guryaha ee aad u baahan tahay si aad u hesho shaqadaada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad sii wadato socodka Mac'aanka Macmiilka ama aad qabto dhibaatada laga yaabo in lagu caawiyo kormeerida agabka qalabka kala duwan, Nidaamka Nidaamka wuxuu u qalmaa fiirin.
Monitor Monitor waa $ 4.99 oo waxaa laga heli karaa Dukaanka Mac App. Demo sidoo kale waxaa laga heli karaa website-ka habdhaqanka.
Eeg doorashooyinka kale ee software ka Tom Tom Mac Software Picks .
Dib u eegid: Barnaamijka "Software for Art"
TinkerTool 5.51: Tani waa barnaamijka Mac Software
Sida loo Iibsado Warqadda Gift iTunes ee Songs, Apps, iyo More
Talo-bixinta Talo-bixinta loogu talagalay iMovie 10
Dejinta barnaamijka iTunes Allowance for Kids
Sida loo gubiyo Muusikada CD-ga ee iTunes: Dib u Dhawaaq Xeerkaaga Disc
SpamSieve: Tom Mac Software Pick
Dib u eegid: Qalabaynta DSP-3200 Subwoofer
Spark 1.6 Review - Barnaamijka Iibsiga Emailka
Sida loo Furo Qaabka Isgaadhsiinta ee Firefox
Iibsiga 3D TV - Maxaad u Baahan Tahay
Xakamaynta Qalalaasaha La-qabsiga: Sida uu u shaqeeyo iyo sababta aad ugu baahan tahay
Xakamee Cabbirka Qoraalka Safari
Sophos Anti-Virus loogu talagalay Mac Home Edition
Barnaamijka Wanaagsan ee Android Wear
Dell Inspiroin 660s Miisaaniyadda Miisaaniyadda Tababbarka PC
SIDA NOOCAYAASHA DIIWAAN-GELINTA DIIWAANKA Iyo Maxaa Loola Yeedhay Dhegaystayaasha
Talo-tallaabo-tallaabo-tallaabo ah si aad u tirtirto xisaabtaada GMX
Kuwani waa Saacadaha ugu Fiican ee Amazon Maanta
Ma yahay Skype ah adeegga VoIP ama VoIP App?
Kumbuyuutarku ma jabin karaa kombuyutarkaaga?
Dib-u-eegista Kalluumeysiga Rapala Pro Bass (X360)
Farshaxanka iyo Daabacaadda Wargeyska Waxtarka leh ee Nooca
Ugu sareeya Shakhsiyaadka ugu Horreeya ee PC
Eeg Boostada ay wadaagaan wada-xaajoodka Windows Live Mail